Sarona siramamy ao Montreal (fototry ny siramamy)
Aiza no hiainana siramamy ao Shalom sy Montreal
Montreal Dia Maple Syrup ... ary Sugar Shacks
Araka ny fikambanan'i Québec avy amin'ny mpanamboatra Maple Soup, maherin'ny roa ampahatelon'ny siram- boalavo eran-tany dia novokarina tao amin'ny faritanin'i Quebec's cabanes à sucre . Ny provintsin'i Québec koa dia mandany vokatra ahodin-doha bebe kokoa isaky ny kapitaly mihoatra noho ny any an-kafa. Ary ho an'ireo izay efa nanandrana namboly namboarina tamin'ny endriny maro, azonao atao ve ny manome tsiny antsika?
Ny ampahany sy ny fonosin'ny traikefa siantifika ao Quebec dia midika hoe ny dingana manenika. Io no fehezan-dalàna handokadoka amin'ny sakafo fisakafoana siramamy.
Ny sakafon'ny Sugar Sugar
Fantatry ny tompon-tany ny zavatra tokony hoeritreretina. Fa ho an'ireo izay vao tonga any Montreal sy ny foto-kevitra momba ny tsy fananana siramamy, dia misy ny famaritana ny zavatra azonao andrasana amin'ny sakafo fihinanao voalohany (raha tsy mandeha mankany Madman Martin Picard ny Sugar Shack Au Pied de Cochon ), izay ahafahanao manantena be dia be na inona na inona).
Aiza no hizarana ny sakafon'ny siramamy farany? Manana safidy roa ianao.
The Shock Sugar Sugar Montreal
Ny fahatongavana dia fombam-pivavahana ara-kolotsaina ao Montreal. Ny vanim-potoana fohy lava izay miova isan-taona, any amin'ny faran'ny volana febroary ka hatramin'ny voalohandohan'ny volana Mey, angamba ny asa atao tsara indrindra, ankoatra ny famangiana siramamy siramamy, dia mihinana mofomamy mafana amin'ny ranomandry vaovao .
Ny tafi-dranomamy Maple dia manomboka miseho any an-tanàna manakaiky ny voalohandohan'ny volana martsa ivelan'ny birao fitetezam-paritra , ao amin'ny Parc Jean-Drapeau sy ao amin'ny tsenan'i Jean-Talon raha toa ka misy siramamy ao an-drenivohitra ao an-tanàn-dehibe. Aprily. Ary raha izy rehetra dia milefitra amin'ny faniriana karingana maika, dia mitondra ihany koa ny tsy fahampian-tsakafo ho an'ny sokatra tena izy, na cabane à sucre , traikefa.
Ary raha toa ka tsy misy zava- mitranga mahatsikaiky momba ny siramamy azo avy amin'ny siramamy ao amin'ny iray amin'ireo nosy tsy lavitra an'i Montreal, angamba angamba ianao maniry ny hanandrana zavatra akaiky kokoa. Ireo sivy voalohany sivana ao amin'ny lisitra eto ambany dia ny fonosana siramamy ao Montreal sy ny toho-tantely mafana ao amin'ny nosy Montreal. Ary na dia tsy manompo sakafo matsiro be aza ny ankamaroan'ny ankamaroany, dia izy ireo no antidotsy tonga lafatra ho an'ny faniriana siramamy ahitra eny an-tsaha.
Ny traikefa saro-bidy nentim-paharazana
Ny tena misintona dia mitranga any ivelan'i Montreal, ao anatin'ny 200 na ireo siramamy niparitaka nanerana an'i Québec. Amin'ny iray amin'ireny, dia afaka manainga ny fiara fitaterana an-tsambo ianao, manandrana mofomamy amin'ny ranomandry, ary mamolavola ny tarehinao amin'ny rehetra-afaka mihinana sakafo nentim-paharazana ianao, izay novolavolaina tamin'ny mozika volom-borona na dihy mifangaro.
Ireo zavatra fito farany amin'ny lisitra eto ambany (manomboka amin'ny # 10) dia siramamy tsy miankina afa-tsy ao Montréal, izay ao anatin'ny adin'ny iray amin'ny ora iray ao an-tanàna.
Miandry ny antsipirian'ny 2018
Isan-taona dia manolotra fanandramana siramamy ho an'ny siramamy ny Minisiteran'ny Botanika any Montréal, isaky ny rivotra sy ny sakafo nentim-paharazana. Fantaro ny siramamy ahazoana ahi-maitso, hano ny mofomamy matevina amin'ny lanezy, mividiana vokatra avy any Maple, ary ento ao amin'ny Tranoben'ny Trano Harena. Ity no safidy mety indrindra ho an'ireo olona avy any an-tanàna, fianakaviana, ary olona monina an-tanàn-dehibe mampiasa tranonkala. Eo am- panaovana anao, dia diniho ny fandaharana fitsidihana ny Insectarium , ny Biodome , ary ny Planetarium .
Rehefa: Manokatra matetika isan'andro isan-kerinandro amin'ny herinandro voalohan'ny volana martsa (famaranana ny lohataona), ary isaky ny faran'ny herinandro martsa
Cost: Call (514) 872-1400 ho an'ny antsipiriany
Le Branch de Richmond à l'Érable
Manonofinofy zava-mahadomelina miavaka izay manentana ny siramamy mihoatra noho ny manodina azy io? Andramo ny kiran'ny lakolosy Le Richmond hifidy faran'ny herinandro mandritra ny vanim-potoana amin'ny 10 ora. Ny safidin'ny karazan-tsakafo lasa teo aloha dia nampidirina tsaramaso ny foie gras izay nampiasaina niaraka tamin'ny ravin-drivotra ra, salady arugula, ary ny toho-tantely frantsay ($ 18), trondro maina $ 15) ary katsaka-kavina menamena ($ 22). Ireo zavatra ao amin'ny sakafo sy vidin-tsakafo.
Cost: Tamin'ny taona teo aloha, ny vidin'ny varotra dia miovaova avy amin'ny $ 11 ho an'ny tsaramaso voankazo ho $ 45 ho an'ny fizarana platter
Te-hahatsapa fa tsy mahatsiaro tena ho any ambanivohitr'io toeram-pambolena azo itokisana io? Andramo ny Parc Jean-Drapeau 's Cabane Chez Jean. Ny sakafo menan'ny zava-manitra rehetra dia maneho mazava tsara izay mety ho an'ny cabane self-respect à sucre . Tsy misy teny raha toa ka miverina amin'ny 2017 ny Cabane. Maharaha vaovao.
Cost: amin'ny 2018, $ 30 olon-dehibe, ankizy 20 dôlara, afaka 3 taona sy ambany
Old Shack Port Port: ny Chef de l'Érable Scéna
Te-hihinana sakafo matsiro nefa miaraka amina rustic vibe? Ankafizo ny sakafo fisakafoana misy karazany dimy ambinifolo eo amin'ny $ 63 isaky ny olona, ​​$ 20 ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona. Ny tsirikana dia ahazoana tonon-sipa, siny lavalava miaraka amin'ny salmon voakaikana amin'ny maple hazo, ary voankazo misy menaka miaraka amin'ny voankazo mainty, pecans ary feta.
Rehefa: Tamin'ny taona 2017, natao ny 10 martsa ka hatramin'ny 16 Aprily
Cost: Amin'ny 2017, ny vidin'ny $ 65 isaky ny olona, ​​$ 25 ho an'ireo ankizy (+ haba sy fanompoana)
Tahaka ny Zaridainan'ny Botanika any Montreal, ny tsenan'i Jean-Talon dia tsy sigara isan-tsokajy . Tsy misy ny sira ara-tsiranoka nentim-paharazana nokarakarain'io fotoana io, saingy TSY toerana mahafinaritra ny miorina amin'ny siram-boankazo ary mankafy siramamy mafana amin'ny servietta. Toy ny famantaranandro, misy satroka mafana maromaro napetraka isaky ny Martsa sy Aprily, indraindray farafahakeliny ny volana febroary.
Vidiny: Fampahalalana azo raisina amin'ny toerana, matetika eo amin'ny $ 1.50 ka hatramin'ny $ 3 ho an'ny tifitra mafana
Cap St. Jacques, zaridaina goavam-be any amin'ny tendrontany andrefana ao amin'ny Nosy Montreal, dia mety hijanona amin'ny lalana raha tsy mipetraka ao amin'ny faritra ianao, fa azo atao amin'ny alalan'ny fitateram-bahoaka ary ny park dia manana Maro ny manolotra vahiny: Ity no traikefa akaiky indrindra amin'ny andro iray amin'ny fofona siramamy ao anaty ala nefa tsy mandao ny tanàna. Ankoatra ny fihinanana voaloboka mena amin'ny alàlan'ny ranomandry, misy tsiranoka pea, pancakes (lemaka na mamy sy siramamy), ary siramamy ahitra amidy amidy eny an-trano. Ny fitaterana traktera dia natolotra ary koa ny fitsidihana ny toeram-piompiana biby.
Rehefa: Manokatra matetika isan'andro isan-kerinandro amin'ny herinandro voalohan'ny volana martsa (famaranana amin'ny lohataona), ary isaky ny faran'ny herinandro hatramin'ny faran'ny Febroary ka hatramin'ny Aprily.
Ny vidiny: $ 3 isaky ny tapa-tavoahangy, $ 3 ho an'ny traktera ($ 4 taona sy mihoatra, $ 3 ho an'ny 2 ka hatramin'ny 11 taona, maimaim-poana ka hatramin'ny 2 taona), $ 5 na minitra ho an'ny sakafo, antso (514) (514) 280-6743 ho an'ny ny vidin'ny hetsika hafa, anisan'izany ny fisakafoanana snowshoeing and ski-county, toetrandro.
Ny tahirin-javaboahary McGill ao amin'ny Oniversite, tokantrano ho an'ny karazan-trondro 330, dia indrisy fa tsy ao anatin'ny halaviran-kevitra ara-dalàna avy amin'ny fitateram-bahoaka. Fa raha afaka manao izany amin'ny fiara ianao, ataovy izany. Hahazo fahafinaretana mandritra ny vanim-potoana ianao eo anelanelan'ny alarobia arboretum, izay toerana misy ny siramamy ao amin'ny siramamy ary hijery ny fomba nanamboarana siramamy. Ny arboretum dia manamboatra siramamy ahitra amin'ny fomba nentim-paharazana: amin'ny fanangonana hazo ao anaty siny ary siro amin'ny kitay hazo.
Ny siramamy Maple dia amidy ao an-trano amin'ny ankapobeny. Fitetezana fitarihana fitarihana mandritra ny ora roa. Ao amin'ny tenin'ny Arboretum: '' mankalaza ny fiverenan'ny lohataona ao amin'ny alokay ahitra, iray amin'ireo vitsivitsy sisa tavela ao amin'ny Nosy Montreal. Manararaotra ny fiarandalamby mankany amin'ny trano fisotroana siramamy ary fantaro ny fomba nanamboarana siropo tamin'ny fomba nentim-paharazana: teo amin'ny kitay hazo, avy amin'ny sipa nangonina tao anaty siny. Sakafo alemà, alika mafana, zava-pisotro ary mazava ho azy, ny taffy amin'ny lanezy dia hamidy amin'ny fiampangana azy. Izany dia ho an'ny ampahany betsaka, hetsika an-kalamanjana. '' Ireo antoko liana dia voatendry hamandrika toerana iray amin'ny fiantsoana (514) 398-7811.
Rehefa: Amin'ny 2018 dia mankalaza ny 8 martsa amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 11 ora sy 25 martsa ary 8 aprily amin'ny mitataovovona hatramin'ny 3:30 pm
Sarany: Miovaova ny fidirana. Ny datin 'ny volana Martsa dia nahafatesana $ 10 ho an'ireo mpikambana, $ 12 ho an'ny tsy mpikambana. Ny volana Martsa sy ny datin'ny volana Aprily dia samy afaka maimaim-poana ho an'ireo mpikambana manana fidirana ara-dalàna tsy tapaka amin'ny tsy mpikambana: zanaka $ 3.50, $ 7 salama, senior & mpianatra $ 4.50, tahan'ny fianakaviana $ 17. Mariho fa ny daty roa farany dia mifandraika amin'ny sakafo novidina tamin'ny toerana.
Cabane Panache et bois rond: Mitsambikina any Promenade Wellington
Ity dia fetiben'ny tsiranoka momba ny tsiroaroa. Ankoatra ny habetsaky ny sakafo an-dàlam-pandehan'ny siropotra, ny mozika nentim-paharazana ao Quebec sy ny dihy, ny lalao baolina fandaka, ny famokarana tanana any an-toerana, ary ny toerana hafa dia ao anatin'ny fandaharam-potoana isan-taona.
Rehefa: 22 martsa ka hatramin'ny 25 martsa 2018
Sarany: fidirana maimaim-poana, matetika $ 2 ka hatramin'ny $ 5 isam-bidy
Brunch de la Cabane à Sucre
Soup, maple ham, pancakes ary sakafo hafa isan-kerinandro no ampiasaina ao Espace La Fontaine, Espace La Fontaine, izay samy siramamy. Na dia tsy misy sira amin'ny siramamy azo avy amin'ny siramamy aza ny fisotroan-tsakafo lava, dia sakafo mahazendana mahaliana sy teti-bola ho an'ny fianakaviana ihany ity taona ity.
Rehefa: Tamin'ny taona lasa dia natao ny faran'ny herinandro nanomboka tamin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 3 ora alina, ny tapatapaky ny volana martsa ka hatramin'ny voalohandohan'ny Aprily
Cost: Tamin'ny taona teo aloha, ny fandaniana dia $ 20 ara-dalàna, $ 15 ho an'ny taona eo anelanelan'ny 4 sy 8
Fihetseham-boankazo lehibe ho an'ny ankizy, Cabane à Sucre Bouvrette dia misy fiaran-dalamby.
Cabane à Sucre tanana
Cabane à Sucre Ny fononteny dia iray amin'ireo siramamy siramamy vitsivitsy manakaiky an'i Montreal izay ahafahanao mamandrika toeram-pitsaboana na fitsaboana iray mialohan'ny sakafo mahazatra siramamy nentim-paharazana, miaraka amin'ny mpivarotra mivantana. Misy trano fonenana mihoatra ny alina koa.
Chef Martin Picard avy ao amin'ny Au Pied de Cochon (Frantsay ho an'ny "eo am-pototry ny kisoa"), ny famolavolàna ao ambadiky ny zavatra iray ao amin'ny tenisy tsara indrindra amin'i Montreal, dia mampitombo ny fandanindaniam-poana amin'ny endriny ara-javakanto eo amin'ny andavanandro, miaraka amin'ny Manimba ny firoboroboana ny famonoana / manadio / manimba ny sakafo rehetra ao amin'ny sakafo, anisan'izany ny dessert sy poutine, miaraka amin'ny foie gras. Nanitatra ny fanjakany efa am-perin'asa tamin'ny taona 2009 mba hampidirana ny vokatra avy amin'ny maple, ny lakozian'ny siramamy Au Pied de Cochon dia teraka, manolotra sidina siramamy nentin-koditra nentim-paharazana tamin'ny savorovoro.
Érablière Denis Charbonneau
Ny fonosam-pandehan'ny sikôlôgika sy ny tononkalo misy paoma, Érablière Denis Charbonneau (aka Verger Denis Charbonneau) dia manolotra ny sakafo karazana siramamy azo avy amin'ny sakafo, feno tsaram-bary, tourtière sy kisoa ary manolotra ny à carte apple Ny fitaovana an-tsokosoko toy ny apple croquettes sy ny voankazo amin'ny applesauce, fahita eo amin'ny siramamy ny fako. Saingy mila mandidy azy ireo ianao fa tsy tafiditra ao anatin'ny sakafo hariva. Hankalaza ny hafanana mafana ny LOVE Charbonneau amin'ny lanezy . Misy ihany koa ny fahafahan'ireo pingo am-pilalaovana sy ny fitsangantsanganana eny an-tendrombohitra eny anaty ala manerana ny arabe.
Ankafizo ny fiangaviana taloha nataon'i Sucrerie de la Montagne, natsangana tamin'ny tranokalan'ny lova 200 taona. Fiarandalamby mirefy 25 kilaometatra eo an-dalana ary ampitomboina ny sakafom-bokatra siramamy miaraka amin'ny trano fialofana mandritra ny alina.
Recommended for families. Angataho ny staff mba hiakanjoana amin'ny akanjon'ny mpisava lalana, tsidiho ny Museum Maple, ankafizo am-pilaminana, ary asa hafa mahafinaritra ao amin'ny Cabane à Sucre Paquette. Toerana.
Ankafizo ny fiara fitaterana manaraka ny iray amin'ireo sakafo mahazatra siramamy tsara indrindra any Québec, miaraka amin'ny loka nahazo ny L'Hermine Maître Sucrier. Toerana.
Fivoriam-be amin'ny Montreal Music, concert, mozika sy fivoriana mivantana
Hetsiky ny seranan'i Québec 2017-2018
Fankalazana ny fetn'i Montreal 2018
Free & Cheap Cheap in Montreal
Sarintanin'ny Collection Garbage Montreal
Parc Jean-Drapeau Winter Attraction: 2018 Season
Martin Luther King Day tao Cleveland
Ny Top 10 Things to do in the Country Hill Texas
Rehefa Mandeha any Kanada - Pros & Cons in Times of Travel
Kalender of Monthly / Festivals in Greater Phoenix
Ny fitsidihana ny toerana taloha teo amin'ny mpihaza an'i Hitler any Berlin
Hitsidika an'i Alaska amin'ny Tany na amin'ny Cruise?
Ireo marika amin'ny fijanonana ao amin'ny Disney World Resort
Mahavariana ery amin'ny Amerika
Fanomezana alaina avy any Canada
Mandeha mankany amin'ny Vancouver International Airport
Ny 8 tsara indrindra any akaikin'i Bangkok